विनोदसिंह विष्ट, बैतडी बैतडीमा मोबाइलबाटै गर्भवती महिलाको तथ्यांक राख्ने कार्य शुरू भएको छ। मेडिक मोबाइलको सहकार्यमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले प्रत्येक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत् गर्भवतीको तथ्यांक राख्न शुरू गरेको हो। प्रत्येक
४० वर्षमा ३० किलो, छैठौ सन्तान जन्माउन खोज्दा मृत्यु
कुमार श्रेष्ठ, बाँके । गनापुरकी सोनापति कल्हरका पाँच सन्तान छन् । ढल्किदो उमेर र स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेकी सोनापति छैठौ पटक गर्भवती भइन् । सुत्केरी बेथा लाग्यो । गनापुर स्वास्थ्य
एचआईभी संक्रमित आधाजसोमात्र औषधि सेवन गर्दछन्
नेपाल समाचारपत्र,लमजुङ । लमजुङमा एचआईभी संक्रमित पहिचान भएका आधा जसेलेमा मात्र औषधि सेवन गर्ने गरेका छन् । जिल्लामा एड्सको नियमित औषधि सेवन एआरभी सेवा लिनेको संख्या ८९ जना रहेको छ
ललितपुर, काठमाडौंको कलंकी बस्दै आउनुभएका ७४ वर्षीय हेमराज गौतम ‘प्रोस्टेटग्लान्ड’ बढ्ने समस्याले निकै पीडित हुनुभयो । चिकित्सकले शल्यक्रिया गरी खुर्केर फाल्नुपर्ने सुझाव दिए । चिकित्सकले दुई पटकसम्म शल्यक्रिया गरी खुर्केर
भनिन्छ रिसले आफैलाई खान्छ । हामीलाई यो कुराको थाहा नै हुँदैन की हाम्रो दैनिक जिवनका स– साना बानीहरु पनि मृत्युको कारण बन्न सक्छन् । अमेरिकी वैज्ञानिकहरुको अनुसन्धानले धेरै रिस उठ्ने
सरकारद्धारा मेडिकल शिक्षाको लागि बंगलादेश जान रोक
काठमाडौं । नेपाल सरकारले बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जान रोक लगाएको छ ।अवैधानिक तवरले लुकीछीपी अझै पनि बंगलादेशमा नेपाली विधार्थी पढीरहेको खवर पश्चात सरकारले बंगलादेशमा मेडिकल पढ्न जान रोक लगाएको
कलिलैमा सेक्स, कलिलैमा एबोर्सन
काठमाडौं । अंकल बच्चा निकाल्ने औषधि दिनुस् रे ! काठमाडौं कालिमाटीको एक औषधि पसलमा करिब १४ वर्षकी किशोरीले यसो भनिरहँदा वरिपरिका सब उनलाई नियालेर हेरिरहेका थिए । यतिकैमा विक्रेताले प्रश्न
एण्टिमाइक्रोयल उपचार विधिप्रति सचेतना !
काठमाडौं । मानिस तथा पशुपन्छीको उपचारमा प्रयोग हुँदैआएको ‘एण्टिमाइक्रोबियल’ उपचार विधिप्रति सचेतना जगाउन राजधानीमा सप्ताहव्यापी विविध कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । ‘एण्टिबायोटिक्स उपचारः पुनर्विचार’ नारासहित मनाइएको साप्ताहिक कार्यक्रमको अवसरमा ‘एण्टिमाइक्रोबियल
भगवती तिमिल्सिना, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का पुत्र प्रकाश दाहालको अकस्मात् हृदयघात (सडेन कार्डियाक अरेस्ट) भई आइतबार बिहान निधन भएको छ। सधंै बिहान सबेरै
धेरै वीर्य फाल्दा के हुन्छ ? पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवलार्इ यस्तो भयो
जति धेरै वीर्य फाल्याे त्यति नै स्वस्थ, यस्ताे छ प्राेस्टेट ग्रन्थी र वीर्यकाे सम्बन्ध |काठमाडाैं- के तपाईंलाई पिसाब छिटोछिटो लाग्ने, पोल्ने, पिसाब गर्दा धारा छुटने, मसिनो हुने, धारा छुट्दा छरिएर
राती नाङ्गै सुत्‍नुका फाइदा !
सुत्ने सबैको आ–आफ्नै तरिका हुन्छ । कोही कपडा लगाएर सुत्छन् भने कोही कपडा नलगाई । एक अनुमानअनुसार १० प्रतिशत मानिसहरु नाङगै सुत्छन् । तिनीहरुले वास्तवमै सही गरेका हुन्, किनभने विना
अश्लील चलचित्रले असुरक्षित यौनसम्बन्ध राख्ने बढे
काठमाडौं । ‘लिभिङ टुगेदर’मा रहेका जोडी असुरक्षित गर्भ रोक्न ७२ घण्टे चक्की (आई–पिल) मा निर्भर हुने गरेका पाइएको छ । उनीहरूमा एउटै चाहना हुने गरेको छ– नियमित यौनसम्पर्क पनि गर्न पाइयोस्, अनिच्छुक
एजेन्सी । ‘स्याटडे नाइट’ अर्थात शनिबारको रात पुरुषका लागि मात्र खास नभई दुनियाँभरका महिलाका लागि समेत खास बन्ने गरेको बेलायतमा गरिएको एक सर्वेले देखाएको छ । बेलायतको हेल्थ एण्ड ब्युटी रिटेलर
महिला कन्डम के हो ? महिलाले योनिमा पसाएर लगाउने कन्डम नै महिला कन्डम हो । पहिले अर्थात् पहिलो जेनरेसन (FC 1) का महिला कन्डम पोलियुरिथिन, जुन एक किसिमको प्लास्टिक हो,
नेपालमै नेता, कलाकार, लाहुरेका श्रीमती कृतिम यौनाङ्गको प्रयोगमा लिप्त
करिब चार महिनाअघिको कुरा हो । धनगढीकी सुविना (नाम परिवर्तन)ले काठमाडौंस्थित सेक्स टोय (यौन खेलौना) पसलमा फोन गरिन् र भनिन्, ‘तपाईंलाई मेरो श्रीमान्ले केही भन्नुभएको थियो ?’ सुविनाले फोन गरेको
दुषित खानेपानीले सिंगो चौरासे टोलका बासिन्दा बिरामी
गणेश घिमिरे, इलाम । दक्षिणि इलामको माइनगरपालिका वडा नम्बर १ को एउटा सिंगो टोलका बासिन्दा बिरामी परेका छन् । माइ नगरपालिका–१ चौरासे टोलका बासिन्दा दुषित पिउने पानीको कारण विरामी परेका
के तपाई यौनाङ्ग चिलाएर हैरान हुनुहुन्छ ?
महिलाहरु आफ्नो जीवनमा चिलाउने समस्याबाट गुज्रिएका हुन्छन् । कहिलेकाँहि यसो हुनु सामान्य भएपनि लामो समयसम्म चिलाइराख्नु वा बारम्बार चिलाइराख्नु भने राम्रो होइन । योनि चिलाउने समस्या धेरै कारणबाट हुन सक्छ
गर्भावस्थामा यौनसम्पर्क राख्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा धेरै दम्पती चिन्ताले पिरोलिइरहेका हुन्छन् । गर्भस्थ शिशु वा महिलालाई केही नकारात्मक असर पर्ला कि भन्ने चिन्ता हुनु स्वभाविक पनि हो, तर
– मागअनुसारको आपूर्ति नहुँदा समस्या – गनिएकै अस्पतालमा रगत स्टक छैन प्रशान्त वली, काठमाडौं । अघिल्लो साता रोल्पा लिवाङका ५४ वर्षीय मानबहादुर बुढामगरलाई एक्कासि पेट फुले काठमाडौं स्थित वीर अस्पतालमा
मुख विभिन्न खाले अफवाह, भ्रम तथा मिथकहरुले घेरिएको छ । धेरैले मुख मैथुन हानीरहित तथा पूर्णरुपमा सुरक्षित हुने भ्रम पाल्छन् । धेरै पुरुषहरुको सोचाइ हुन्छ कि, यौनसम्पर्क अघि भुइँकटहरको जुस